CAFFEE: (Fulbaana 15, 2014): Haasaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo guutuun isaa kunooti. // - Saturday, 25 September 2021
CAFFEE - (Fulbaana 13,2014): IMALA CAFFEE OROMIYAA Kutaa 2ffaa - Saturday, 25 September 2021
CAFFEE - (Fulbaana 13, 2014): Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo Yaa’ii Xumuuraa Bara Hojii Caffee 5ffaafi Yaa’ii Duraa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 6ffaa gaggeeffamu ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kennaniir - Saturday, 25 September 2021
CAFFEE - (Fulbaana 12,2014): IMALA CAFFEE OROMIYAA KUTAA 1FFA - Saturday, 25 September 2021
Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomiin haasawaa isaanii keessatti, Barri Hojii Caffee 5ffaa kun, qabsoo hadhaawaa geggeesseen rakkooleefi qormaatilee ciccimoo keessa darbuun, qormaatilee turan gara carraatti jijjiiruun; bu’aalee amma arginu kunniin akka dhugooman taasiseera. Bu’aa jijjiiramichi argamsiisetti dhimma bahuun paartiin keenya filannoo marsaa 6ffaa sagalee caalmaan yeroo itti mo’ate keessa Caffee hojiirra ture, Caffee bu’uura demokiraasii dhaabeefi ergamasaa injifannoowwan adda addaatiin miidhagsee as gaheefi miira injifannoo ummata keenya keessatti uume waan ta’eef Caffee carra-qabeessan jedha. Ummata keenyaafis galataafi ulfina guddaatu mala.
Amaanaa guddaa ummanni keenya nutti kenne fudhannee, fedhiifi kaka’umsa guddaa ummanni keenya misoomaaf qabu yeroo gara yerootti dabalaa jiru waliin yoo madaalamu hojiileen fuula duratti nu eeggatan hojii ulfaataafi tumsa qaamolee hundaa barbaadu waan ta'eef, hanqinaaleen kenna tajaajilaa keenya madda rakkoo bulchiinsa gaarii ta'aa waan jiraniif irree gamtoomeen, caalmaatti qindoofneefi xiiqiifi kutannoo olaanaadhaan hojjechuun imaanaa uummanni nutti kennate fiixaan baasuf; tokkummaa cimaafi aaragalfannaa tokko malee hojjechuun; injifannoo kanaa olii galmeessuuf akka onnannu waamicha koo dabarsa.
Dumuarrattis Yaa'iin Idilee 14ffaa, kun ajandaalee qabamaniif irratti guyyoota lamaan as aanan keessatti bilchinaan kan irratti mari'atuufi turtiin taasifnu kan milkii akka nuuf ta'uun hawwa.
CAFFEE: (Fulbaana 15, 2014): Haasaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo guutuun isaa kunooti. //
CAFFEE - (Fulbaana 13,2014): IMALA CAFFEE OROMIYAA Kutaa 2ffaa
CAFFEE - (Fulbaana 13, 2014): Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo Yaa’ii Xumuuraa Bara Hojii Caffee 5ffaafi Yaa’ii Duraa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 6ffaa gaggeeffamu ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kennaniir
CAFFEE - (Fulbaana 12,2014): IMALA CAFFEE OROMIYAA KUTAA 1FFA
Toorbee kana 12396
Ji'a kana 44088
2008 irraa eggalee 4882072
CAFFEE: (Fulbaana 15…
Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...
CAFFEE - (Fulbaana 1…
Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...
_//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...
A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...